Automatic tanteraka Mask Production tsipika
Mihoatra ny 18 entana
Mihoatra ny 2 tapitrisa
Portable vokatra tsara tamin'ny laser Fibre milina marika avo lenta Features 1. fibre gropy, tsara kalitao toerana, ny hery Optical hakitroky fanamiana, milamina Output Optical hery, mihaona fitakiana ny fampiharana ny tsena mahazatra; 2. RayFa tena lasa nomerika haingam-pandeha galvanometer scanner, kely habeny, hafainganam-pandeha avo sy ny fahamarinan-toerana tsara; ny fampisehoana iraisam-pirenena mandroso tonga ny sehatra; 3. Mahery rafitra fanaraha-maso, ny fanodinana optimizes tahirin-kevitra isan-karazany araka ny fampiharana, fanohanana M ...
Desktop Fibre Laser Ma ...
Desktop vokatra tsara tamin'ny laser Fibre milina marika avo lenta Features 1. fibre gropy, tsara kalitao toerana, ny hery Optical hakitroky fanamiana, milamina Output Optical hery, mihaona fitakiana ny fampiharana ny tsena mahazatra; 2. RayFa tena lasa nomerika haingam-pandeha galvanometer scanner, kely habeny, hafainganam-pandeha avo sy ny fahamarinan-toerana tsara; ny fampisehoana iraisam-pirenena mandroso tonga ny sehatra; 3. Mahery rafitra fanaraha-maso, ny fanodinana optimizes tahirin-kevitra isan-karazany araka ny fampiharana, fanohanana mu ...
CO2 Laser fanapahana milina
Laser CO2 vokatra tsara voapaika milina tamin'ny laser mpanora 1390 ho kitay MDF Laser manapaka mahatonga feno milina fampiasana ny solosaina fandaharana fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso isa mekanika sarimihetsika fanaraha-maso, mba fanapahana dia marina sy ny fikarakarana no vokany kokoa noho ny zavatra ilain'ny mpanjifa. Manompo ny mpanjifa araka izay ilainy, noho izany dia mifidy ny tsara indrindra rindrambaiko famolavolana, milina rafitra, singa elektronika sy ny fifantenana faritra mba hitandrina ny fahamarinan-toerana, fametrahana mazava tsara sy haingana ao amin'ny kilasy voalohany ...
Handheld Fibre Laser W ...
Handheld tamin'ny laser fibre welding milina Handheld L ...
Manidina vokatra tsara tamin'ny laser Fibre nanamarika machin ...
Desktop vokatra tsara tamin'ny laser Fibre nanamarika Maky ...
Laser CO2 vokatra tsara voapaika milina tamin'ny laser engra ...
Xintang Community, Houjie Town Dongguan City, faritanin'i Guangdong, CHINE